We Fight We Win. -- " More than Media ": ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအရေးBBC သို့ ပေးပို့ ထားသောဆွးနွေးချက်
ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအရေးBBC သို့ ပေးပို့ ထားသောဆွးနွေးချက်
ယနေ့ဧပြီ ၁၃ ရက်။၂၀၁၃ မှာ BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကစီစဉ်တင်ဆက်မဲ့ လွတ်လပ်အတွေး
BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်၊ လန်ဒန်မြို့ 
ရက်စွဲ။ ဧပြီလ ၁၃ ရက်၊၂၀၁၃
အကြောင်းအရာ။ ။ ဆွေးနွေးချက်ပေးပို့ခြင်း
၁။လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာသူတို့ ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နိုင်မယ်လို့ 
ပါဝင်နိုင်မဲ့ကဏ္ဍအတော်များများရှိပါတယ်။လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့် status အမျိုးမျိုး
နဲ့ နေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာအများစုဟာ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုး ပုံသဏ္ဍန်အမျိုးမျိုး
စီးပွါးရေး၊လူမှုရေး၊လူ့ အခွင့်အရေး၊နိုင်ငံရေးစတဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေပြီးဖိနှိပ်ခံခဲ့ကြရတဲ့
အတွက်ရောက်လာကြတာပါ။ဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိကြတဲ့အခါမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး
တွေ လွတ်လပ်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ ကြုံရရှိခံစားကြရပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာ ကျနော်တို့ လိုနိုင်ငံ
ခြားသားတွေဖြစ်စေ ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်စေအားလုံးဟာ ဥပဒေအောက်မှာတူညီတဲ့အကာ
အကွယ် အကျိုးခံစားမှုရရှိကြပါတယ်။အားလုံးဟာလည်း စည်းကမ်းတွေ ဥပဒေတွေကို လေးစား
လိုက်နာကြရပါတယ်။နေ့ စဉ်လူမှုဘ၀တွေကို ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျနေထိုင်နေကြပါတယ်၊
ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် အသေးအဖွဲလို့ 
လမ်းသွားရင်း ကိုယ်စားတဲ့ ချော့ကလက်၊ချိုချဉ်စသဖြင့်တို့ ရဲ့စက္ကူအမှိုက်ကအစသူ့ နေရာနဲ့ သူ
အခြားသော လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့ အကြုံအမျိုးမျိုး၊အသိပညာ အတတ်ပညာအမျိုးမျိုးတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။
ဥပဒေ၊ပါလီမန်လွှတ်တော်၊အစိုးရအဖွဲ့ ၊လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့ အစည်းတွေ၊အောက်ခြေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ အစည်းစတာတွေရဲ့သဘော
သဘာဝတွေ လုပ်ပုံကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံတွေကိုလည်း အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို တွေ့ ကြုံ
သိရှိနေကြပါတယ်။ဒီလိုအတွေ့ အကြုံတွေ၊အသိပညာတွေ အတတ်ပညာတွေဟာ ကျနော်တို့ 
ကျနော့်လေ့လာမှု အတွေ့ အကြုံတွေအရဆိုရင်တော့ နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နေတဲ့
တချိန်ထဲမှာဘဲ infrastructure တည်ဆောက်ရေးကိုလည်းလုပ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံ
ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာလည်း နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တည်ဆောက်ရေးတွေမှာ ပါဝင်
အကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်၊နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွါးရေး စတာတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာအတွေ အကြုံကျွမ်းကျင်မှုအသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုပြန်လည်ဝေငှပေးနိုင်မှာပါ။ သူ့့နေရာနဲ့ သူ လူမှန်နေရာမှန် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ တော့
လိုပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆို ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ လူမှန်နေရာမှန် မဖြစ်ခဲ့ကြ
၂။ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှု အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ
ပါဝင်နိုင်အောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာကျနော့်အနေနဲ့ ဆွေးနွေး
ကျနော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေထဲမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး
တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အဖွဲ့ စည်းတွေဖြစ်စေ၊ တဦးချင်းစီအနေနဲ့ ဖြစ်စေ အချို့ သော
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု issue တွေမှာမပါဝင်ကြတာတာအနည်းငယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျစဉ်တလျှောက်လုံးမှာ ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေး
ဆိုပြီး တက်တက်ကြွကြွနဲ့ နိုင်ငံတကာရော မြန်မာအစိုးရပါသိအောင် တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့
ကြပါတယ်။နေပူမိုးရွာမရှောင်ပေါ့ဗျာ၊ တခါတလေ ခိုက်ခိုက်တုန်ခြမ်းအေးလှတဲ့ နှင်းတွေ
ကျနေတဲ့ဆောင်းလရာသီတွေအပါအ၀င်ပေါ့ဗျာ။မျှော်လင့်ချက်တွေအပြည့်နဲ့ ပါ။အချို့ ဆို
အဓိဌာန်လိုမျိုး ဒေါ်စုမလွတ်မချင်းနေ့ စဉ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဒီနေ့ မနက်မှာဒေါ်စုဟာ
ကျနော်တို့ ရှိနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ မကြာခင်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ တော့
မှာပါ။ ဒေါ်စုဟာကျနော်တို့ အားလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို
လက်ရှိအစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်း လက်တွဲပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ 
ကျနော်တို့ ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအ၀င် အခြားသောနိုင်ငံများမှာ
ရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာတွေ လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အခန်းကဏ္ဍတွေ
မှာပါဝင်နိုင်အောင် လက်တွေ့ ကျတဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးမှုအနေနဲ့ တော့မရှိသေးဘူးလို့ 
ဘဲပြောချင်ပါတယ်။ဒေါ်စုအနေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦး အနေနဲ့ သော်၎င်း၊
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တဦးနေနဲ့ သော်၎င်း ပြည်ပကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ 
ရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မိခင်နိုင်ငံကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာပြန်လာ
နိုင်ရေးကို ဥပဒေတရပ်အနေနဲ့ သော်၎င်း၊ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော
ပြဌာန်းချက်တခုအနေနဲ့ သော်၎င်းအစိုးရမှ လုပ်ဆောင်ပေးလာအောင် ဆွေးနွေးပြော
ကျနော်အပါအ၀င် ရည်ရွယ်ချက်ဆန္ဒတူညီသူ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားနေကြသူအချို့ 
ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး ဒေါ်စုကိုစာတစောင်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။မကြာခင် ဒေါ်စု
၂၀၁၁ ဩဂုတ်လ မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှပြည်ပရောက်
မြန်မာတွေပြန်လာကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုသမ္မတပြောဆိုကြေငြာချက်နဲ့ 
ပါတ်သက်ပြီး BBC ကဘဲကျနော့်ကိုအင်တာဗျူးတခုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ မှာတော့အများစုဟာ
အစိုးရအနေနဲ့ တိကျတဲ့ ပြဌာန်းချက်(သို့ မဟုတ်) ဥပဒေတရပ်ပြဌာန်းပေးစေလိုကြောင်း
တဆက်ထဲ ကျနော်အနေနဲ့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်သားများ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းမဲ့ပြီး
လွတ်လပ်လုံခြုံစွာ နိုင်ငံကိုပြန်လာခွင့်ရမှ နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ တည်ဆောက်ရေး
လိုပါတယ်။ခုချိန်မှာ all inclusive ဆိုတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးဆိုတဲ့
စကားလုံးကို အစိုးရကရော နိုင်ငံရေးပါတီတွေရော အခြားသော အဖွဲ့ အစည်းအတော်
များများကရော နှုတ်ဆိတ် အသံတိတ်နေကြတာကိုကျနော့်အနေနဲ့ အလွန်အံဩမိကြောင်းလဲ
ပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတိတ်သမိုင်းတွေကိုကျနော်တို့ အားလုံးဟာ မမေ့ကြစေ
ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။၁၉၄၈ မြန်မာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်က လွတ်လပ်ရေး
ရခဲ့ကတည်းက တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းတွေရော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်း အင်းအားစုတွေ
ရော မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပါဝင်လိုသူတွေပါဝင်ခွင့်ရကြဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အရေးကြီး
ကြောင်းသမိုင်းသက်သေအထာက်အထားတွေပြန်လည်အမှတ်ရကြစေဖို့ တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ 
မှတ်ချက်၊ ၊ တယ်လီဖုံးမှလည်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဆက်သွယ်လိုကဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဖုံး။ (+၈၁ ) ၀၉၀ ၁၅၀၆ ၂၈၉၃
ဧပြီလ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၃
Just go home. Everything gonna be alright.
စောက်ရူးတွေပါကွာ မိုးသီးေ၇ာ ကိုကိုတောင်ေ၇ာ